Collaboration – Page2– OOTDMYANMAR
08 MINIMALIST OUTFITS THAT WILL LOOK CHIC NO MATTER WHAT
No Comments on 08 MINIMALIST OUTFITS THAT WILL LOOK CHIC NO MATTER WHAT
ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အထာကျနေစေမယ့် Minimalist Outfit များ
The minimalist trend began in the 1990s. In that time, comfy silhouettes in nude, black, and white dominated!
၁၉၉၀ ခုနှစ်လောက်မှာ Minimalist တွေ စတင်ခေတ်စားလာတာပါ။ အဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင် အညိုဖျော့ဖျော့ အရိပ်ဆင်လေးတွေ၊ အနက်နဲ့ အဖြူရောင်တွေက လူကြိုက်များပါတယ်။
And this style obviously lives on until now. Why? It requires little yet provides huge classy impact.
အဲ့ဒီ ဒီဇိုင်းတွေကို အခုချိန်ထိ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်နေကြတုန်းပါပဲ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ များများစားစားရွေးချယ်ဝတ်ဆင်စရာမလိုပဲ အထက်တန်းကျတဲ့အမြင်ကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်လို့ပါ။
So, whether you’reaminimalist or you’re looking for outfits inspos, we’ve rounded up 8 minimalist outfits you could try any for an effortless look.
ကိုယ်က Minimalist ဖက်ရှင်ကိုသဘောကျသူ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဝတ်စုံအတွက် အကြံဥာဏ်လိုချင်သူတွေအတွက် Minimalist outfit ၈ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Go nude (အညိုဖျော့ဖျော့)
Left photo via Pinterest. Right photo via @msenglu wearing @mdsmyanmar
2. Matchablack dress with leather accessories (အနက်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ leather accessories )
Left photo via @ootdmyanmar wearing @mdsmyanmar. Center photo via @pinterest. Right photo via @mdsmyanmar
3. Black skirt andawhite button down (အနက်ရောင်စကပ် နဲ့ ကြယ်သီးပါတဲ့ အဖြူရောင်ရှပ်)
Left and right photo via @mdsmyanmar. Center photo via @pinterest.
4. Casual black top + khaki trouser (ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအင်္ကျီအနက် နဲ့ ကာကီဘောင်းဘီ )
5. Jeans + Cardigan (ဂျင်း နဲ့ အပေါ်ထပ်)
Left via @mdsmyanmar. Right photo via @pinterest.
6. LBD withablazer (LBD နဲ့ ဘလေဇာ)
7. White tee & pair of jeans (တီရှပ်အဖြူ နဲ့ ဂျင်း)
Left photo via @pinterest. Right photo via @mdsmyanmar
8. Grey and denims (မီးခိုးရောင် နဲ့ ဂျင်း)
Left and center photo via @mdsmyanmar. Left photo via @pinterest.
PS sure to catch MDSMyanmar’s live this coming Wednesday October2at 730PM. And get the chance to score the staple pieces for your minimalism vibe.
လာမယ့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ၊ အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ ည 7:30 အချိန်မှာ ပြုလုပ်မယ့် MDS Myanmar ရဲ့ Live အစီအစဥ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ Minimalist vibe ကိုပေးစွမ်းမယ့် အဝတ်အစားအသစ်လေးတွေက စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
Tags Fashion, mdsmyanmar, minimalism, ootdmyanmar